Ọrụ - Mestech Industrial Limited
Dịka ụlọ ọrụ na-arụpụta ọrụ na-arụ ọrụ, MESTECH abụghị naanị inye ngwaahịa, kamakwa ọ na-enye azịza na ọrụ teknụzụ niile. Ọrụ ndị a gụnyere ngwaahịa plastik, ngwaike ngwaahịa ịkpụzi na mmepụta, ịkpụzi akụkụ, nhazi post, nhazi ngwaahịa na nzukọ, nkwupụta azụmaahịa na akụkụ ndị ọzọ.
Ebu na ogwu ogbugba ịkpụzi
MESTECH nwere usoro ọkpụkpọ plastik zuru ezu. Emere ihe kariri umu abuo nke abuo nke 300 n'ime otu afọ, a na-akpụzi ntanye na nhazi nke ngwaahịa plastik. Kpụrụ nke ebu bụ HASCO, DEM, MISUMI na CHINA. Na mgbakwunye na izute ndị ahịa na mpaghara a, a na-ebupụkwa ebu anyị na Europe, North America na Asia na mba ndị ọzọ na mpaghara.
Metal akụkụ nhazi
Ngwongwo siri ike nwere ebe na-agbaze elu, ike na ike, omume, ductility na ọla luster karịa ihe ndị ọzọ. Site n'ịgbanwezi ihe mejupụtara ya na ngwongwo nke ọla, anyị nwere ike ịnweta ihe dị elu karịa nke plastik na ihe ndị ọzọ na-abụghị ọla
Magburu onwe metal alloy na elu kpọmkwem akụkụ nwere ike nweta. Ya mere, a na-eji akụkụ igwe na ígwè ọrụ na akụrụngwa, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụgbọelu, ụgbọelu, igodo, njem, ọkụ, ọgwụgwọ na eletriki.
Ngwongwo ndị a na-ejikarị eme ihe bụ ígwè, alloy aluminum, zinc alloy, copper, alloy alloy and titanium alloy. Processingzọ nhazi nke akụkụ nke ha mere dị iche iche n'ihi usoro ha dị iche iche, ihe mejupụtara na ojiji ha. Na mgbakwunye na agbaze ọla, isi teknụzụ nhazi anyị na-eji enweta ogo na ọdịdị nke ọla bụ: ịnwụ anwụ, ntanye ntụ ntụ na ịkpụzi.
A zuru okè ngwaahịa n'ezie na-abịa site magburu onwe imewe mbụ.
Site na mmepe nke teknụzụ Intanet na ntoputa nke teknụzụ ngwaahịa ọhụụ, mmelite nke ngwaahịa ọhụrụ na ahịa taa na ngwa ngwa na ngwa ngwa. Etu ị ga - esi mee ka ngwaahịa gị banye n’ahịa n’oge dịkarịsịrị nta bụ isi ihe na - akpata asọmpi nke ụlọ ọrụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enyefekarị ihe ndị dị na mpụga iji mezue ụfọdụ ma ọ bụ ọtụtụ ọrụ imepụta ngwaahịa, iji belata usoro mmepe ngwaahịa, ma lekwasị anya na ọrụ ahịa na isi ihe.
Ndị injinia Mestech nwere ike ịnye akụkụ plastik, akụkụ ngwaike na nhazi usoro ngwaahịa, nyocha ọ nwere ike ịchọta, yana nrụpụta ịkpụzi nsị, akụkụ nrụpụta yana ọrụ nzukọ ngwaahịa gwụchara dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
A ọhụrụ ngwaahịa site na mmalite nke imewe ka mmepụta na ahịa, mgbe mgbe mkpa itinye ego a otutu ego, ume na oge. Ogo ngwaahịa a na-ekpebi ihe ịga nke ọma nke ngwaahịa ahụ. Prototype bụ ụzọ dị mkpa iji nwalee imepụta ngwaahịa. A na-eji ya iji nyochaa nsogbu ndị dị na imepụta ngwaahịa, melite nhazi ahụ, ma zere mmejọ ndị na-eduga na mbibi dị ukwuu na njedebe. Dịka ọmụmaatụ, maka ụgbọ ala, ụgbọ elu, ụgbọ mmiri na ngwaahịa eletriki na eletriki, a na-eme ihe ngosi maka nkwenye tupu ịkpụzi ebu na akụkụ.
Mestech nwere ike ịnye ndị ahịa CNC, mbipụta 3D nke akụkụ plastik na akụkụ ọla yana imepụta ihe eji aka eji aka mee SLA, yana obere ihe nlele nke obere.
E nwere ọtụtụ puku ngwaahịa na ahịa, nke a na-emelite kwa ụbọchị. Asọmpi ahụ n’ahịa na-akawanye njọ. Lọ ọrụ dị iche na nha. Ọtụtụ ụlọ ọrụ, na-ejedebe site na njirimara azụmaahịa ha, ha na-elekwasị anya na nhazi na mmepe nke ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa teknụzụ ọhụụ, ma ghara ịtọlite ​​nzukọ nzukọ ngwaahịa ha.
Anyị nwere ike inye nzukọ ngwaahịa na ọrụaka ọrụ maka ndị ahịa dị otú ahụ. Ọ gụnyere usoro nke ọrụ nkwụsị dị ka imepụta ngwaahịa, imepụta akụkụ, ị nweta na mgbakọ.
Iji nye ọrụ dị elu na ngwaahịa nke ịkpụzi plastik, ihe nkedo na ịkpụzi ígwè bụ otu n'ime ebumnuche MESTECH. Anyị nwere akụrụngwa na akụrụngwa anyị kachasị mma, anyị nwekwara otu ndị nwere injinia na ndị ọrụ nwere nka. Anyị na-ekwe nkwa ogo ngwaahịa na ọrụ anyị site na mmelite na-aga n'ihu nke teknụzụ na teknụzụ dị elu, yana nzukọ na njikwa siri ike.
Ngwaahịa na-arụ ọrụ nwere usoro nke usoro ndị ọzọ. Iji izute na-emepe emepe mkpa nke ndị ahịa, anyị na-enye turnkey ọrụ site na mbụ imewe, mmepe, rụpụta na ngwaahịa nzukọ. Can nwere ike ịchọtakwu banyere nke ọ bụla n'okpuru ma ọ bụ ọzọ, kpọtụrụ anyị iji kwurịta ihe ndị ị chọrọ.